XOG: Xasan Sheekh oo la wareegay Xildhibaano ay ku tashanayeen Farmaajo & Kheyre | Hobyo Media Online
XOG: Xasan Sheekh oo la wareegay Xildhibaano ay ku tashanayeen Farmaajo & Kheyre
Oct 28, 2018 - jawaab
Xog gaara oo ay heleyso warbaahinta ayaa sheegeysa in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu Dowlada Madaxweyne Farmaajo kala wareegay Xildhibaano taageersanaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii uu kusoo guryo noqday Magaalada Muqdisho wuxuu ku howlanaa sidii Xildhibaanada Nabad iyo Nolol uu ula wareegi lahaa, waxaana Saraakiil u dhow Xisbiga Xasan Sheekh ay sheegeen in hada Xildhibaano Mucaafad ahaa ay usoo wareegeen Mucaaradka inkastoo cadadkooda saxda ah aanan heyn balse aan dib idin kaga soo gudbin doono.
Hoyga uu Xasan Sheekh ka degan yahay Magaalada Muqdisho waxaa maalin kasta lagu arkayaa Xildhibaano cusub oo kulamo gaar gaar ah la qaadanaya Kusimayaasha Xasan Sheekh, waxaana ujeedka ugu weyn uu yahay sidii ay kaga soo goosan lahaayeen Madaxtooyada Soomaaliya.
Xisbiga uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ayaa balanqaadyo waa weyn u sameynaya Xildhibaanada, waxaana qaarkood loo balanqaaday Xilal in la siin doono hadii Doorashada soo socota ay ku guuleystaan hoggaaminta dalka, iyadoo lacago badan farqaha loogu shubay.
Talaabadan uu qaaday Xisbiga Xasan Sheekh ayaa cadaadis badan saareysa Dowlada Federaalka Soomaaliya maadaama Xildhibaanada intooda badan ay iyada lacago ku siin jirtay difaaca Dowlada.
Sidoo kale Xildhibaanadan kusoo biiray Mucaaradka ayaa walwal kale ku abuuraya Villa Somalia maadaama ay kaalin ka qaadan karaan Mooshinka socda eek a dhan ka ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo